magorkhe1 2739 days ago
nepcha1 2685 days ago
nepcha1 2673 days ago
stopthewar 2673 days ago
Visitor from US is reading AUTO CHECK for CARFAX
Visitor from US is reading FIANCE/K1 VISA
Visitor from US is reading LATEST KATHMANDU FROM SWYAMBHU
Visitor from US is reading Father of Upendra Mahato raped 15 yrs girl
Visitor from US is reading http://www.youtube.com/watch?v=k88IodIY_BA
Visitor from US is reading Looking for Photographers & Videographer in Dallas
Visitor is reading friends from vanasthali in usa
[VIEWED 3952 TIMES]
Posted on 07-29-12 3:42 PM Reply [Subscribe]
Can you imagine how much is 25 BILLION?
रु.२५ अर्ब हिनामिना गर्ने दाहाल नै हुन्: चन्द
नेकपा-माओवादी सचिव नेत्रविक्रम चन्दले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लडाकु शिविरको रु. २५ अर्ब हिनामिना गरेको बताएका छन् ।
Posted on 07-29-12 5:22 PM [Snapshot: 140] Reply [Subscribe]
अन्स बन्डामा कमि भएको हो ?
Last edited: 21-Sep-12 06:01 PM
Posted on 09-21-12 5:17 PM [Snapshot: 847] Reply [Subscribe]
Posted on 10-02-12 10:27 PM [Snapshot: 1229] Reply [Subscribe]
सुमार्गी र प्रचण्डको सम्बन्धमा संकट !
१७ असोज, काठमाण्डौ । चोरको बाउ चण्डाल भन्ने उखानलाई ब्यबहारमा उतार्दै एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका क्यासियर ब्यापारिक साझेदारका रुपमा चिनिने अजेयराज सुमार्गीले प्रचण्डलाई नै चक्मा दिनेगरि तर्साएका छन् ।
प्रचण्डले लडाकू र पार्टीबाट उठाएको अरबौं रकम सुमार्गीमार्फत बिभिन्न परियोजनामा लगानी गरेको बजार हल्ला निकै पुरानो हो । ज्ञानेन्द्रदेखि प्रचण्डसम्मलाई प्रभावमा पार्न सक्ने तीनै धुर्त सुमार्गीले यतिबेला प्रचण्डलाई पनि जिल्लाएको खवर जनआस्था साप्ताहिकले छापेको छ ।
समाचारमा दावी गरिएअनुसार प्रचण्ड र सुमार्गीवीच सम्मत्तिको स्वामित्वका बिषयलाई लिएर झगडा बढेको छ । सुमार्गीमार्फत बिभिन्न ठाउँमा भएका लगानीलाई ब्यबस्थितरुपमा आफ्ना निकटहरुको नाममा नामसारी गर्ने भन्दै प्रचण्डले हिसाव मागेपछि सुमार्गीले हिजोआज प्रचण्डको फोनै उठाउन छाडेका छन् ।
प्रचण्ड सचिवालयका एक सदस्यको हवाला दिंदै समाचारमा जनाइएअनुसार नेपालमा एकाध मिडिया र घरहरुमा लगानी भएपनि धेरै लगानी मुलुक बाहिर नै छ । नेपालमा सम्पत्तिको हकवाला तलमाथि पर्न साथ हल्ला हुने भन्दै सुमार्गीले स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न नमानेपछि यतिखेर प्रचण्ड डराईरहेका छन् ।
zसुमार्गीले भने लण्डनमा रिसोर्ट खोल्दा प्रचण्डबाट आएको सवै रकम सकिएको भन्दै उताको लगानीबाट हिसाव मिलाउन प्रचण्डलाई भनेको आफु निकटस्थहरुलाई बताउँदै आएका छन् । बेलारुसतिर बस्ने एक धनाढ्य गैरअवासीय नेपालीसँग मिलेर लण्डनको हिथ्रो बिमानस्थलेदेखि ६७ किलोमिटर टाढा एक रिसोर्ट खोलिएको छ जसमा प्रचण्डले सुमार्गीमार्फत लगानी गरेको बताइएको छ । हालकी मिस नेपाल सृष्टि श्रेष्ठका पिता प्रकाश श्रेष्ठसँगको साझेदारीमा त्यो रिसोर्ट खोलिएको बताइएको छ । प्रचण्ड, सीता र प्रकाश लण्डन गएर त्यो रिसोर्ट हेरेको र मन परेपछि आफुले पैसा पठाएको सुमार्गीले दावी गरेका छन् ।
Posted on 10-03-12 8:32 AM [Snapshot: 1386] Reply [Subscribe]
moubadi lai karbahai garne kasai ka bau ko himmat cha...hoina bhane garnu paro ni..